Weerar Gaari looga Gubay Ciidanka Kenya Oo Ka Dhacay Duleedka Deegaanka Hoosingoow.
Tuesday September 05, 2017 - 10:48:05 in Wararka by Super Admin
Khasaara xooggan ayaa ciidamada gumeysiga Kenya kasoo gaaray weerar hor leh oo lagula beegsaday deegaano katirsan gobollada Jubbooyinka.
sawir gaari ciidanka Kenya looga gubay duleedka Baardheere
Wararka ka imaanaya deegaanka Hoosingoow ee Xadbeenaadka ku dhow ayaa sheegaya in weerar dhabagal ah lala eegtay ciidamo katirsan melleteriga Kenya kuwaas oo sahay kasoo gelbiyay dhanka dhulka Somalida NFD.
Weerarka oo shalay gelinkii dambe dhacay ayaa lala helay kolonyo kusii jeeday deegaanka Hoosingoow oo qiyaastii 40 KM ujira xadbeenaadka, wariye ku sugan Jubbooyinka ayaa soo sheegay in ciidamada Kenya laga gubay gaari gaashaaman.
Jugta qaraxyo iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayay ayaa laga maqlay dhulka howdka ah ee ku teedsan deegaanka Hoosingoow, ilo wareedyo ayaa sheegaya in Ciidamada Al Shabaab ay qabsadeen gaariga laga gubay melleteriga Kenya oo ay uga carareen goobta dagaalka.
Ciidamada shisheeye ayaa marwalba oo ay sahay isku gudbinayaan waxay weeraro dhiig bixin ah kala kulmaan ciidamada Xarakada SHM.
Dhageyso:Diiradda Jimcaha Oo looga hadlay Fatahaadda Wabiga Shabelle.